Kadib kulan deg deg ah oo magaalada Addis Ababa ay ku yeesheen golaha wasiirrada wadanka Itoobiya ayay ku go'aamiyeen in xaalad degdeg ah wadanka lagusoo rogo.
Wasiirka warfaafinta iyo isgaarsiinta Itoobiya ayaa bayaan uu soo saaray waxaa laga akhriyay Raadiyaha iyo Telefeshinka Qaranka wadanka wuxuuna iclaaminayay xaalad degdeg ah oo aan la sheegin inta bil ee uu socanayo.
Golaha wasiirrada Itoobiya ayaan bayaanka ay soo saareen ku sheegay in wadanku marayo xaalad halis ah "joojinta rabshadaha ka dhanka dowladda waa mid daruur ah, kadib xaalad halis ah oo waddanku galay waxaa lagama maarmaan ah xaalad degdeg ah" ayaa lagu yiri Bayaanka.
Wariyaal ku sugan magaalada Addis Ababa ayaa soo sheegaya in go'aanka kasoo baxay dowladda Itoobiya uu yahay mid mugdi badani ku jiro sababtoo ah lama sheegin waqtiga uu Bandawgu socanayo iyo waxyaabaha mamnuuca ah inta uu socdo.
Hailemariam Desalegnoo ahaa R/wasaaraha wadanka ayaa Khamiistii lasoo dhaafay ku dhawaaqay in uu iska casilay xilkii uu u hayay dowladda iyo hoggaaminta xisbiga talada haya.